Casio PRO TREK WSD-F21HR: Famaritana, vidiny ary fandefasana | Androidsis
Ny fisafidianana famantaranandro miaraka amin'ny Wear OS dia mitombo hatrany. Herinandro lasa izay ny Misfit Vapor X dia natolotra ary izao Io ilay Casio PRO TREK WSD-F21HR aseho amin'ny fomba ofisialy. Ity famantaranandro ity dia famantaranandro fanatanjahan-tena, natao ho an'ireo mpampiasa mavitrika indrindra eny an-tsena. Noho izany dia mahatratra ampahany amin'ny fitomboana feno, miaraka amina endrika sporty tena koa.
Casio dia nanitatra ny fisafidianana famantaranandro. Ny Casio PRO TREK WSD-F21HR dia mamela antsika fanatsarana marobe, toy ny sensor amin'ny tahan'ny fo, izay zavatra hitantsika amin'ny fiambenana maro ankehitriny. Amin'ny ankapobeny dia hitantsika fa aseho ho toy ny famantaranandro kalitao amin'ity tranga ity.
Ny famolavolana famantaranandro dia tsy manify na maivana toa ny hafa hitantsika eny an-tsena. Ny marika dia mamela antsika amin'ny famantaranandro fanatanjahan-tena kokoa izay toa vonona amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Izy io dia miaraka amin'ny efijery TFT roa, izay misy ampahany miloko sy ampahany monochrome.
1 Famaritana Casio PRO TREK WSD-F21HR
Famaritana Casio PRO TREK WSD-F21HR
Tonga ny famantaranandro miaraka amin'ny tontonana LCD TFT 1,32 santimetatra amin'ny habeny, miaraka amin'ny vahaolana 320 x 320 teboka. Ho fanampin'izay, ity Casio PRO TREK WSD-F21HR ity dia miavaka amin'ny fananana mari-pahaizana miaramila, ilay MIL-STD-810 fanta-daza. Io dia mamela ny famataranandro hilentika hatramin'ny 50 metatra. Ny efijery fiambenana dia capacitive, izay misy GPS mifanaraka amin'ny GLONASS sy MICHIBIKI ihany koa.
Mikasika ireo sensor dia mahita fanomezana isan-karazany isika. Anisan'ireny isika manana sensor pression ny rivotra, sensor altitude, accelerometers, gyroscope, magnetic compass ary sensor optika. Io sensor io no tompon'andraikitra amin'ny fifehezana ny fitepon'ny fony. Ao amin'ny famantaranandro dia manana vibrator handefa fampandrenesana koa isika. Ary koa, ity Casio PRO TREK WSD-F21HR ity dia miaraka amina mikrô natsangana.
Amin'ny lafiny fifandraisana, miaraka amin'ny Bluetooth 4.2, ary WiFi. Misy bokotra maromaro ny famantaranandro, ankoatry ny bokotra on sy off, manana bokotra hidirana amin'ny sarintany isika ary iray hafa hanokatra ny rindranasa rafitra. Ny baterian'ny telefaona dia manome antsika fahaleovan-tena 1,5 andro, na dia ampiasaintsika ho toy ny famantaranandro mahazatra aza izy io, tsy misy fampiasa marani-tsaina dia azontsika ampiasaina mandritra ny iray volana izany, araka ny voalazan'ny marika. Ny bateria dia azo andoavana adiny 2,5. Izy io koa dia manana refy 61,7 x 57,7 milimetatra ary 16,8 milimetatra ny hateviny. Raha ny lanjany dia 81 grama ao anatin'izany ny bracelet.
Raha te hividy ity famantaranandro ity dia mila miandry herinandro vitsivitsy isika. Ny Casio PRO TREK WSD-F21HR hamidy izy amin'ny volana septambra, araka ny nanamafisan'ny orinasa azy manokana. Na dia daty manokana amin'ny volana aza dia tsy nomena ka afaka mividy. Ny famantaranandro dia havoaka amin'ny tranokalan'ny orinasa, ary koa amin'ny fivarotana.
Amin'izao fotoana izao, ny vidiny voamarina dia $ 499., saingy tsy fantatray ny vidiny ao amin'ny euro. Azo antoka fa amin'ity herinandro ity dia hahalala bebe kokoa momba ity famataranandro ity isika rehefa mahatratra ny tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Casio PRO TREK WSD-F21HR: Ilay fiambenana ara-panatanjahantena vaovao miaraka amin'ny Wear OS
Amboary ny bokinao anglisy amin'ny Grammarly, rindrambaiko fitendry izay manolotra soso-kevitra mitovy hevitra amin'ny fanoratanao